ऊर्जा मन्त्रीको प्रश्न : नलगाडको डीपीआरमा किन ढिलाई ? « News of Nepal
ऊर्जा मन्त्रीको प्रश्न : नलगाडको डीपीआरमा किन ढिलाई ?
काठमाडौँ । जाजरकोटमा आयोजना स्थल रहेको कूल ४१७ मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त नलगाड जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मा प्रगति नभएकामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आपत्ति जनाएको छ ।
मन्त्रालयमा आज वन ताथ वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतसमेतलाई साथमा राखेर ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले परियोजनाको डीपीआरमा प्रगति नभएकामा गुनासो गर्दै शीघ्र काम नभए परामर्शदाता कम्पनीसँगको सम्झौता खारेज गर्ने चेतावनी दिनुभयो ।
आयोजना प्रमुखसहितका कर्मचारी र डीपीआरको जिम्मा पाएको परामर्शदाताका प्रतिनिधिसँग मन्त्रीद्वयले छलफल गर्दै हालसम्म भएको प्रगतिका बारेमा जानकारी लिनुभएको हो । सो आयोजनाको डीपीआरको काम अष्टे«लियन कम्पनी स्मेकले गरिरहेको छ । कम्पनी स्मेकका प्रतिनिधि बाबुराम भारद्वाज र रेशम ढकालले हालसम्म भएको प्रगति समेटिएको प्रतिवेदनको प्रगतिबारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।
उहाँहरुले डीपीआरको काम करिब ८५ प्रतिशत सकिएको र बाँकी १५ प्रतिशत कामका लागि समय थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।सन् २०२१ को सेप्टेम्बरसम्ममा काम सकिने जानकारी दिइएको थियो ।
मन्त्रालयले भने कामको अध्ययन गरी आवश्यक समयमा उपयुक्त जवाफ दिने बताएको छ । अष्टे««लियन कम्पनी स्मेक, एमडब्लुएच र नेपालको उदय जेभीले संयुक्तरुपमा डिपीआरको काम गरिरहेका छन् । सन् २०१६ मा नै तीन वर्षमा डिपीआरको काम सक्ने गरी नलगाड जलविद्युत कम्पनी र सम्वद्ध परामर्शदाता कम्पनीबीच सम्झौता भएको थियो ।
यसअघि डीपीआरकोकर्ताको मागअनुसार अगष्ट २०१९ मा पहिलोपटक तीन महिना र अगष्टदेखि मे २०२० सम्म नौ महिना दास्रोेपटक डीपीआरको समयावधि थप भइसकेको छ । तैपनि, अझै काम नसकिएको भन्दै ऊर्जामन्त्री पुन र जाजरकोटबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित वनमन्त्री बस्नेतले परामर्शदाता कम्पनीका प्रतिनिधिलाई बोलाएर छलफल गर्नुभएको हो ।
छिटो काम सक्नुस, नत्र सम्झौता रद्द : मन्त्री पुन
छलफलमा मन्त्री पुनले डीपीआरको काम तोकिएकै समयमा नसक्नुमा कमजोरी भन्दै विगतका कमजोरी सच्याएर छिटो काम सक्न आग्रह गर्नुभयो । काम नभएको अवस्थामा सम्झौता खारेज हुन सक्ने चेतावनी उहाँले दिनुभयो । “विकासका काममा ढिला गर्ने प्रवृत्ति अरु नै छ”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले गाली खाने अवस्था छ, अरुले काम बिगार्ने तर गाली हामीले खाने हुँदैन ।”
मन्त्री पुनले आयोजनाको डीपीआर सकिने बित्तिकै सरकारले लगानी जुटाएर काम अघि बढाउने जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिवेदन तयार गर्न समय लाग्दा आयोजना नै नबन्ने खतरा बढ्ने भन्दै उहाँले गम्भीरतापूर्वक सम्झौताअनुसार काम गर्न परामर्शदाता कम्पनीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
मन्त्रालयले नलगाड जलविद्युत आयोजनालाई क्षेत्रीय ऊर्जा सन्तुलन कायम गर्न तथा कर्णालीको विकासमा कोसेढुंगा सावित हुनेरूपमा अघि बढाएको छ । मन्त्री पुनले उक्त आयोजनाका लागि वैदेशिक लगानी जुटाउन प्रयास गर्दै आउनुभएको छ ।
जापानी अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग ९जाइका०ले नलगाड जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने इच्छा राख्दै आएको छ । त्यसबारे मन्त्री, सचिव र सह–सचिवस्तरमा जाइकासँग पटक पटक छलफल भएको छ ।
आजको छलफलमा मन्त्री बस्नेत र ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले परामर्शदाताले कोभिड–१९ को बहाना बनाएर डीपीआरमा ढिलाइ गरेका चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको थियो । कोभिडको बहानामा काममा ढिलाइ गर्ने प्रवृत्ति क्षम्य नहुने उहाँहरुको भनाइ थियो ।
डीपीआरको हालसम्मको तयार भएको विवरणअनुसार आयोजना निर्माणमा प्रसारण लाइनबाहेक प्रतिमेगावाट लागत रु ३१ करोड र प्रसारण लाइनसहित रु ३५ करोड खर्च हुने देखिएको छ । जलाशययुक्त आयोजना भएका कारण जलाशय निर्माणमा बढी खर्च हुने भएकाले अन्य आयोजनामा भन्दा लागत बढी लाग्ने देखिएको हो ।
जाजरकोटको नलगाड गाउँपालिका–७ दल्लीमा विद्युत गृह र बारेकोट गाउँपालिका–८ अँधेरीखोलामा आयोजनाको प्रस्तावित बाँधस्थल छ ।
नलगाड नगरपालिकास्थित नलगाड खोला र ठूलीगढीको दोभान नजिकै भूमिगत पावर हाउस निर्माण हुनेछ । आयोजनाका लागि बारेकोटको अँधेरी खोलादेखि दल्लीसम्म ८।५ किमी लामो मुख्य सुरुङ र दुईदेखि तीन किलो मिटरसम्मका तीनवटा सहायक सुरुङ बन्नेछन् ।
यस्तै २४८ मिटर अग्लो बाँध निर्माण हुनेछ । जलाशयमा ४७ करोड ४० घनमिटर पानी जम्मा हुनेछ । आयोजनामा चार वटा टर्वाइन रहनेछन् । प्रत्येक टर्वाइनबाट १०४।२५ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ । आयोजनाबाट एक वर्षमा एक हजार २३२ गिगावाट घण्टा ऊर्जा उत्पादन हुनेछ ।
आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कोहलपुर सवस्टेशनमा जोडिनेछ । आयोजनास्थलबाट कोहलपुरसम्म १२ किमी लामो प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने योजना छ ।